Indlela yokuthintela isifo seswekile: iingcebiso eziza kukugcina usisifo | Amadoda aQinisekileyo
Ngaba uyazi ukuba ungasithintela njani isifo seswekile? Ipesenteji ebonakalayo yabemi inesifo seswekile (uninzi lungaqondakaliyo), ngelixa kunjalo Abantu abaninzi basemngciphekweni omkhulu wohlobo lweswekile yesi-2, olona luqhelekileyo.
Imikhwa yakho inokukuzisa kufutshane okanye kude nesi sifo, ke lonke utshintsho oluqinisekileyo lubaliwe. Kodwa kufuneka wenze ntoni? Ungasinqanda njani isifo seswekile? Ezi zilandelayo zezona ndlela zisebenzayo xa kufikwa ekuthinteleni isifo seswekile.
1 Ukunciphisa umzimba
1.1 Qeqesha rhoqo
1.2 Kwenziwe ntoni ukunciphisa umzimba
1.3 Sika iikhalori ekudleni kwakho
2 Indlela yokuthintela isifo seswekile ngokutya
2.1 Thatha ifayibha engaphezulu
2.2 Yitya ngakumbi ukutya okuziinkozo
3 Ezinye iindlela zokutya kwakho
3.1 Ukubheja ii-carbohydrate ezisempilweni
3.2 Nciphisa amafutha kunye nokuzalisa
3.3 Nciphisa icholesterol
3.4 Yitya iintlanzi
4 Iimpawu zeswekile
Ukugcina ukutyeba kakhulu kunye nokutyeba kakhulu kunokunciphisa umngcipheko wesifo seswekile. Ukuba ucinga ukuba impilo yakho inokusebenzisa iiponti ezimbalwa, cinga ukuzama ezi ngcebiso zilandelayo.
Kungcono kancinci kunento, kunjalo, kodwa ukuzilolonga ukuba nefuthe elibonakalayo kwimpilo kunye nokunciphisa umngcipheko wezifo ezininzi, kubandakanya nezo zisichaphazelayo kwesi sihlandlo, akwanelanga ukuya ejimini amaxesha ngamaxesha . Uya kuwunciphisa umngcipheko wesifo seswekile ukuba uzilolonga rhoqo, ubuncinci iiyure eziyi-2.5 ngeveki.
Kwenziwe ntoni ukunciphisa umzimba
Jonga eli nqaku: Indlela ukunciphisa umzimba. Apho uyakufumana isikhokelo esipheleleyo, esibandakanya ukwenziwa komzimba kunye nokutya. Kuya kukunceda ukunciphisa umzimba kwaye, okona kubaluleke kakhulu, kukungaphindi ubuye, kuba le yimikhwa enokugcinwa ixesha elide.
Sika iikhalori ekudleni kwakho
Ukuphulukana nobunzima kufuna ukutshisa iikhalori ezingaphezulu kokutya, kunye nokusika iikhalori sesinye sezicwangciso eziya kukunceda ukufezekisa oku. Lawula ubukhulu bezabelo kwaye uqiniseke ukuba utya imifuno eyaneleyo, iqela lokutya elanelisa ukutya kunye neekhalori ezimbalwa.
Indlela yokuthintela isifo seswekile ngokutya
Cinga ngokutya ifibre, intlanzi, kunye nee-carbohydrate ezisempilweni. Kuya kufuneka unciphise amafutha kunye ne-cholesterol.
Thatha ifayibha engaphezulu
Uninzi lwabantu alufumani fayibha yaneleyo, into ethi, ukuba ikwimeko yakho, kuya kufuneka utshintshe, kakhulu. Ifayibha ibalulekile kwimpilo entle. Ukuba uqinisekisa ukuba iikhalori ekutyeni kwakho zikhatshwa sisixa esihle sefayibha (Iigram ezili-14 zicetyiswa kuzo zonke iikhalori eziliwakaUya kuwunciphisa umngcipheko wokubandezeleka kwesi sifo.
Yitya ngakumbi ukutya okuziinkozo
Zinjani iinkozo ekudleni kwakho? Ukutshintsha iinguqulelo ezigcweleyo zesonka, isonka, ipasta, kunye nesidlo sakusasa kunokunceda ukuthintela isifo seswekile.
Ezinye iindlela zokutya kwakho
Ukubeka ezi ngcebiso zingasentla linyathelo elikhulu ekuthinteleni isifo seswekile, kodwa ukuba uyafuna ungenza ngakumbi. Ezi zikhokelo zilandelayo ziyilelwe abantu abasele benesifo seswekile, kodwa zinokusetyenziswa ngabo basemngciphekweni omkhulu:
Ukubheja ii-carbohydrate ezisempilweni
Ukutya okunempilo kunye nokwahlukeneyo kufuneka kubandakanye yonke into kwisabelo sayo esifanelekileyo, nkqu ii-carbohydrate, ezihlala ziphoswa njengongendawo ngokungalunganga. Kwaye ayizizo zonke iicarbohydrate iikhalori ngaphandle kokunye, kodwa kananjalo kukho iziqhamo, imifuno, iinkozo ezigcweleyo, iimbotyi, kunye nobisi olunamafutha asezantsi. Ezi ziicarbohydrate ezisempilweni, ezibaluleke kakhulu ekunyangeni nasekuthinteleni isifo seswekile.
Nciphisa amafutha kunye nokuzalisa
Ukunciphisa ukutya kwakho amanqatha agcweleyo yincam ephindaphindwe kaninzi xa kufikwa ekufezekiseni ukutya okusempilweni. Injongo kufuneka ibe ukunciphisa ubukho babo de bamele ngaphezulu kwe-7% yokutya kwakho amanqatha mihla le. Xa kufikwa kumanqatha othutho, injongo kufuneka ibenamabhongo ngakumbi: zisuse ngokupheleleyo kukutya. Zombini zigcwele kwaye zidlulile, Ukubonisana neelebheli zemveliso kuya kukunceda ukunciphisa ubukho babo kunye nokuthintela izifo kunye neengxaki ezinxulumene nazo, Njengesifo seswekile nezinye ezininzi.
Ikholesterol yenye into ebalulekileyo ukuba usemngciphekweni omkhulu wesifo seswekile okanye ufuna nje ukuphucula umgangatho wokutya kwakho. Kodwa ungasithintela njani isifo seswekile ngecholesterol? Iingcali zithetha ngeemiligram ezingama-200 ngosuku njengomda xa kuziwa ekwenzeni ukutya okubonayo ukuba isifo seswekile kunye nezinye izifo.
Iiproteni kwizidlo ezininzi zivela phantse kuphela kwinyama, kodwa umsebenzi kufuneka wahlulwe ngokwamaqela okutya aliqela. Ngenxa yomxholo wefayibha, iimbotyi zilukhetho olukhulu. Kwakhona Kuyacetyiswa ukuba utye iintlanzi ubuncinci kabini ngeveki. Njengoko usazi, kukho iindlela ezahlukeneyo zokupheka iintlanzi, ifryer yeyona ingacetyiswayo.
Ngokukhawuleza ukuba ifunyenwe, kungcono, ke yenza idinga nogqirha wakho ukuba ukrokrela ukuba unesifo seswekile. Ezi mpawu zilandelayo zinokubangelwa sisifo seswekile:
Ukwanda kwendlala kunye nendlala
Umendo opheleleyo kwinqaku: Amadoda aQinisekileyo » Kufanelekile » Indlela yokuthintela isifo seswekile